Lọ Na-ere Onlinentanetị
Zụrụ nke ukwuu ezubere iche
okporo ụzọ weebụsaịtị
ỌR TR EGO
Anyị nwere ike izipu okporo ụzọ gị:
HBỌCH H NDUM AH .RU
AKAFKỌ AKALKỌ BAĹ EGO
ARB .R TR njem
Zụta ezigbo ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ
Anyị maara ihe na-akụda mmụọ ịnweta ị nweta ọtụtụ okporo ụzọ na saịtị gị. Ma ọ bụrụgodi na ị jikwaa itinye aka, kedu ihe ọ ga - abụ ma ọ bụrụ na ha adịbeghị njikere ịgbanwe n’ime ndị ọbịa nwere mmasị na ebe nrụọrụ weebụ?
Oge ugboro ugboro anyị hụrụ ka ndị mmadụ na-etinye ego ha niile na ịre ahịa ma nweta ntakịrị okporo ụzọ na weebụsaịtị ha - Mgbasa ozi na Facebook / Instagram nwere ike ị nweta ụfọdụ mmasị mana ọ bụchaghị tọghatara okporo ụzọ weebụsaịtị / pịa. Dịkwa ka olile anya ha na ebumnuche ha nke ịbụ onye nwe azụmaahịa isii ma ọ bụ asaa ga-aga anwụrụ ọkụ.
Ever nwetụla mgbe ọ dị gị ka ị̀ na-azọ otu ụzọ ahụ?
Ma ị bụ onye na-echefu ego, onye furula ọtụtụ puku dollar na Mgbasa ozi ma ọ bụ onye nwere obere azụmaahịa na-ewere azụmahịa gị n'ịntanetị na nke mbụ; nuru anyi. Anyị nwere ike inyere aka!
Usoro maka inweta ihe na ịre ahịa adịghị mgbagwoju anya dị ka ụfọdụ nwere ike iche. Ihe ichoro bu Ọzọ Etu Ego Ego Niche. You chọrọ ndị ọbịa dị njikere ịbanye na obere akpa ha, wepụta kaadị akwụmụgwọ ha, ma zụta ihe ị na-ere.
Zọ kachasị mma iji bulite okporo ụzọ bụ ịhapụ ọrụ anyị.
Ọ DORE Ọ BVERR O NA-EGO NA-EBURU EGO
ỌT MT M THB THR M INB THR IN INBANYE N'THELỌ EGO
MAGH B Bzụta "AKW ”KWỌ" KWES TER THAT KWES THATR YOU KWES HR H OWLỌ
Ọ dịghị ihe ọzọ ịgba chaa chaa na ụfọdụ "na-emetụta"
Yabụ kedu otu anyị ga-esi chebe okporo ụzọ weebụsaịtị anyị?
Ọ bụrụ na ị nụtụbeghị niche okporo ụzọ tụgharịa, ọ bụ n’ihi na onweghị ihe a na-akpọ guru ga-agwa gị banyere ya - usoro ga-agbakọ aka ọnụ ahịa okporo ụzọ ha dị oke ọnụ ma gbochie uru sitere na usoro ọmụmụ ha na-ere.
Agbanyeghị, ntugharị azụmaahịa dị mma bụ usoro dị oke egwu iji nweta okporo ụzọ dị n'ịntanetị dị mkpa na-emetụta azụmahịa gị. Ihe nke a putara bu na ndị ọbịa websaịtị ị natara bụ ndị nwere mmasị na azụmaahịa azụmahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa nke na-ere ngwa ụgbọ ala ga-enweta okporo ụzọ ezigara site na saịtị ụgbọala.
Anyị na-eji usoro dị iche iche dị ka mmapụta, usoro mmụta maka igwe, yana usoro mgbasa ozi na-azụ ihe site na nnukwu netwọkụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Na mgbakwunye, anyị na-ejide nnukwu atụmatụ nchịkọta nke ngalaba na akụnụba.
Site na ọganihu na E-Commerce na Dropshipping na afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị maara na ọrụ anyị ga-adaba na ihe ahịa chọrọ. Ọ bụ ya mere ndị otu ndị ọkachamara anyị ji anwale ma bulie sistemụ anyị oge niile site na ịnwale ndụ na mbọ R&D anyị. Nsonazụ ahụ? Ndị kasị elu n'ịtụgharị kpọmkwem okporo ụzọ ga-ekwe omume! Na-eji teknụzụ AI (Artificially) kachasị ọhụrụ, Anyị na-emegharị okporo ụzọ nke kachasị mkpa na niche gị (Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ngwa ọrụ ntanetị ga-enweta okporo ụzọ site na ntanetị weebụsaịtị / blọọgụ)
Okporo ụzọ niile dị 100% mmadụ na-ezubere oke na ya mere na-ebuli ọhụhụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na ohere ahịa.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị họọrọ nlezianya na-arụ ọrụ iji duzie ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ sitere na IPs pụrụ iche gaa na obodo ị chọrọ na niche. Anyị na-ekpuchi ọtụtụ mba na USA, UK, Europe, Singapore, Eshia, na Afrịka. N'ihe banyere 320 niche ahịa, anyị na-ejide n’aka na ị ga-enweta okporo ụzọ ezubere iche maka ịdị elu, wee si otú a na-ebuli ewu ewu nke weebụsaịtị gị, ma na-amụba ohere ahịa adịghị agwụ agwụ.
Anyị na gị n'akụkụ, gị na ebe nrụọrụ weebụ a ga-enweta visibilụ ọzọ.
1. Ju ebe a
2. KA ANY V NA-EGO KA EGO NA-EGO
3. BITR REL SITE NA EGO NA-EGO ANY D EGO EGO
Mpempe akwụkwọ iji jupụta na ndenye ọpụpụ na-enye anyị nkọwa niile anyị chọrọ iji mezuo arịrịọ gị. Ọ ga-ewe naanị 30 sekọnd iji mezue ya.
Tupu ịmalite usoro anyị, anyị na-ahụ maka ịchọpụta arịrịọ gị na usoro nchedo anyị. Ka obi sie gị ike, anyị anaghị ajụ gị maka paswọọdụ ọ bụla - nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa maka anyị!
N'oge usoro nkwenye, anyị na-akwado izi ezi nke azụmahịa gị - ka emechara, anyị na-arụ ọrụ iwu kwadoro ya mere anyị na-atụ anya na ndị ahịa anyị ga-enwerịrị nke ọma! Nke ahụ pụtara na saịtị gị ga-enwerịrị ihe okike. Ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị ike ịnweta spyware, adware, nje ma ọ bụ ikpuru trojan na ya. Ọ bụrụ na i nyere iwu maka ụdị weebụsaịtị ndị a, anyị ga-emechi mkpọsa okporo ụzọ gị ma ị gaghị enweta nkwụghachi.
Ọ bụrụhaala na ị bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke na-agbaso usoro anyị na ọnọdụ anyị, a ga-ahazi arịrịọ gị n'ime ụbọchị atọ ruo ụbọchị anọ!
Ma voilà! Ozugbo i nyefere arịrịọ a, ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-eme. 'Ll ga - amalite ịhụ okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ime ụbọchị 3 ruo 4 nke arịrịọ gị. Na otu n'ime hits ị nwetara na-ekwe nkwa ịbụ ezigbo ndị ọbịa nke mmadụ!
Niche Online Traffic na-ejide ihe karịrị 2 afọ iri nke ahụmahụ
Anyị na-eji ọtụtụ nnukwu ọnụnụ mgbasa ozi mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na nnukwu netwọ nke ndị mmekọ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na-anapụta ezigbo okporo ụzọ weebụ mmadụ, ma na-agba mbọ maka ndị ahịa ha nke ọma. Ndị otu anyị na-eji ikike dị elu, gụnyere ndị rụworo ọrụ na nnukwu aha na teknụzụ na mgbasa ozi.
Anyị bụ ọnụọgụ mbụ maka ezigbo okporo ụzọ Internetntanetị na ndị ọbịa ezubere iche. Anyị na-anya isi na ọrụ anyị iji hụ na kacha mma na mkpa nke ezigbo okporo ụzọ weebụ mmadụ.
Nke ahụ bụ ihe na - eme ka anyị bụrụ ụzọ okporo ụzọ PREFERRED maka ịwụfu mmiri, E-Commerce na azụmahịa ọ bụla ọzọ nwere ọnụnọ n'ịntanetị. Ruo ugbu a, anyị enyela okporo ụzọ maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị 50,000, n'ọtụtụ nyiwe, gụnyere Shopify, Clickbank, Etsy, Ebay na Amazon. Echegbula - anyi kpuchie ekpuchi!
Trafficzụta okporo ụzọ si Niche Online Traffic abụghị naanị nkwalite ọma na ọnụnọ azụmahịa dị n'ịntanetị gị, kamakwa ọkaibe ọrụ ndị ahịa.
Ozugbo ịhọrọ Niche Online Traffic, ị ga-ahụ ụzọ anyị dị iche iji bụrụ nke nhọrọ kachasị mma.
Ekpuchiri ụlọ ọrụ (ejedebeghị na ya):
Okporo ụzọ gaa na saịtị Blog / ọdịnaya gị
Ngwongwo / ala na ụlọ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Mmekọrịta
CBD / Hemp mmanụ
Ọrụ si n'ụlọ
Mee Ego Online
Ndi dijitalụ / Ihe ndi okike
Ọtụtụ azụmaahịa B2B na B2C
Hapu ndi okacha mara ahia gi
Mgbasa ozi ọhaneze na Mgbasa ozi Facebook na-enwe oke ọnụ?
Ọrịa inwe “Mmasị” naanị na enweghị trafik na-emepụta?
Anyi ghota. Anyị nwere ihe ị chọrọ.
Anyị na-anwale okporo ụzọ anyị niile, sistemụ AI anyị na-amụ ma na-agbanwe 24 / 7 ya mere uru na okporo ụzọ dị mma na-agafe nke abụọ ọ bụla.
AKWVKWỌ HB CONR. NSO ỌM .AKA
Ndị ọbịa zitere gị bụ ndị nwere mmasị na Niche gị, ya mere, ohere kachasị nke ntụgharị.
Anyị ejirila ụlọ ọrụ rụọ ọrụ kemgbe narị afọ 2. Azụmahịa B2B na azụmahịa B2C amụbaala nke ọma na afọ niile.
Ricgwọ ahịa na-ezube ịzụta okporo ụzọ weebụsaịtị
Ndị ọbịa na-ahụ maka 200
Adreesị IP ezigbo
Izu Izu Okwu
Nhọrọ Izu Ezo
$119/3 Ọnwa ole na
Ndị nleta kwa ụbọchị 200 maka ọnwa 6 ma ọ bụ 1000 Ndị ọbịa kwa ụbọchị maka ọnwa 1
$368/12 Ọnwa ole na
Ndị nleta kwa ụbọchị 200 maka ọnwa 12 ma ọ bụ 2000 Ndị ọbịa kwa ụbọchị maka ọnwa 1
SEO adịghị mma
Nweta usoro isiokwu
Mụbaa okporo ụzọ ọchụchọ
Tingzọ Mbelata Edge
IHE NDU ANY C NA-EKWU KWURU gbasara US
SETH - ONWE ONYE
"Nyochaa okporo ụzọ ahụ na saịtị ọhụrụ ma enwere m ike ịsị na nke ahụ bụ ezigbo mma, ezigbo mmadụ na-aga. Ọ ga-anwale ọzọ."
LAURA - EGO HL ST AKA AKA
Anyị akwụsịla iji mgbasa ozi FB dị oke ọnụ mgbe anyị jichara ndị a. Nlereanya!
Akara - MARKETING MANAGER na ụlọ ọrụ saas
NicheOnlineTraffic na-enye nnukwu ọrụ yana nkwado zuru oke na nke ziri ezi. Ha na-eme ike ha niile iji nye gị okporo ụzọ ịchọrọ, okporo ụzọ ha dị nchebe kpamkpam. Ọ masịkwara m n'ezie, ọ na-agbada ahịa m !.
Copyright © 2020 Niche Online Traffic. Ikike niile echekwabara.